Xildhibaanada Baarlamaanka oo maanta ansixiyay hindise sharciyeedka Saxaafadda – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindise sharciyeedka Saxaafada, kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Golaha shacabka.
Kulankan ayaa waxaa soo xaadiray illaa 142 mudane, waxaana xildhibaanada ka doodeen hindise sharciyeedka Saxaafadda oo in muddo ah Baarlamaanka hor-yaalay, isla markaana marxalado kala duwan soo maray.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa sheegay in hindise sharciyeedka ay ansixiyeen 139 cod, halka ay ka aamuseen saddex xildhibaan, ma jirin cid diiday.
“Waxaa kulankii maanta soo xaadirtay 142 xildhibaan, hindise sharciyeedka Saxaafadda waxaa ansixisay 139 cod, halka 3 mudane ay diiday, ma jirin cid diiday, sidaas darteed waa ansax”ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir ayaa uga mahad celiyay Xildhibaanada ansixintii hindise sharciyeedka Saxaafadda, waxaana uu tilmaamay in sharcigan uu muhiim u yahay dalka.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa mas’uuliyinta Wasaaradda Warfaafinta kula dar daarmay inay dhaqan geliyaan sharciga saxaadda.